Yeyiphi eyona nguqulelo ibalaseleyo yeAutoCAD? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yintoni eye yaba inguqulo ye AutoCAD?
Sisoloko sibona umbuzo ngaphaya kwalo, malunga naluphi uhlobo olulungileyo okanye isizathu sokuba sililondoloze; ngoko xa kuthe kwafika umntu omtsha kuthiwa yinto yokwenza kuphela. Ngamafutshane, njengendawo yokuqala Senza intlanganiso kwi-Facebook, apho i-Geofumadas inebalandeli be-18,000, kwaye ubone ukuba bekuphi impendulo:
I-AutoCAD i-2012 ihamba phambili, siyayiqonda into entsha, kwaye i-Facebook yindawo apho izizukulwana ezitsha zihlala khona.
Kodwa yintoni ebonisa ukuba kwindawo yesibini imele i-AutoCAD 2007, nangona ibe nguguqulelo lwee-6 kwiminyaka edlulileyo.
Emva koko, kwindawo yesithathu, i-AutoCAD 2013 izandile, siyaqonda kwakhona into emnandi kwaye, xa sibuza umbuzo kwiminyaka emibini kamva, kuya kuthethwa ngokufanayo ngenguqu yamuva.
Kubonakala njengowesine kwi-AutoCAD 2010, ngamanqaku aphantsi kodwa ehamba uluhlu olubandakanya iivoti ezikhethekileyo ezizo zonke ezinye iinguqulelo.
Yintoni eyenza abantu baxabise ii-AutoCAD 2012, i-2007 kunye ne-2010?
Injongo yale phepha kukuhlalutya iinguqulelo 10 entsha AutoCAD, ukuzama ukucacisa iipateni yokukhululwa yi AutoDesk kunye chavelela ukuthabathele uluntu ukuthenga ngoku izithuthi intanethi kunye nothungelwano ekuhlaleni zidlala indima kubalulekile ekusasazeni iindaba.
Siza kusebenzisa uhlalutyo lwetheyibhile elandelayo eshwankathela utshintsho olwenzekileyo kwi-AutoCAD kule minyaka ili-10 idlulileyo. Ibandakanya imiyalelo emitsha ethe yavela ngonyaka (ngaphandle kuka-2004 ukuba asiyisebenzisi le ngqwalaselo), imiyalelo efumanekayo kuhlobo, imiyalelo efumene utshintsho, engafumanekiyo ngenxa yenani elipheleleyo lemiyalelo yangoku kunye nemiyalelo eyekisiweyo (Oku akubandakanyi ingxelo ka-2013 kodwa kweso sisele kongezwa bonke abo bayeka kwiminyaka eli-10). Siphinda siqwalasele kuphela iinguqulelo ezisisiseko, hayi ezithe nkqo (umz.I-AutoCAD Civil 3D, AutoDesk Maya, njl.
1. Umjikelo weefomathi ze-dwg ezintsha
I-AutoDesk igcinwe kwifom ye-dwg nganye kwinguqulelo ukusuka kwi-1.0 kwi-1980 ukuya kwi-1998 ngonyaka nge-AutoCAD R14. Emva kwe-AutoCAD 2000 ukuya phambili, kufikelelwe umjikelo omalunga neminyaka emithathu, umkhwa obuzwa ngokungafunekiyo ngabaninzi.
Kukho ininzi ngaphambi kokuba i-2004 inguquko kodwa ibalulekileyo kukuba ukusuka kule fomathi i-dwg ayisabelana nge-Open Design Alliance (i-ODA) njengoko yayifakwe kwifom ye 2000.
Ukusukela ngoku ukuya phambili siyabona ukuba iinguqulelo xa bekukho utshintsho kwifomathi, ziye zavela kuba bemele ukusetyenziswa ngcono kobutyebi kodwa nangenxa yokuba inyanzele umsebenzisi ukuba alahle uguqulelo lwangaphambili ukuze aqhubeke nokuhambelana kwifomathi entsha. Kuyinyani enomdla ukuba iminyaka apho i-AutoCAD yalahla khona imiyalelo yayingunyaka ka-2006 xa i-36 yalahlwa kwaye ngo-2010 eminye imiyalelo eli-17; Eminye iminyaka ukushiywa yayiyimiscus phakathi kwe-1 kunye ne-3 imiyalelo.
Ngenxa yoko isiphetho sethu sokuqala:
Amanqwanqwa abalulekileyo e-AutoCAD ahlala ephawulwa yiminyaka ifomathi ye-dwg enotshintsho: I-AutoCAD 2000, AutoCAD 2004, AutoCAD 2007, AutoCAD 2010.
Ukusuka apho sigqiba kwelokuba uguqulelo luka-2013 kufuneka lube nephethini efanayo ukusukela ukuba ifomathi ye-dwg itshintshile. Nangona singakholelwa oko kunokwenzeka ngenxa yokuthandwa kakhulu okukufumeneyo AutoCAD 2012 kunye nemali encinci uphuculo lwe-AutoCAD 2013.
Nangona kunjalo, ukucacisa ukuba utshintsho kwifomathi alunxulunyaniswa nohlobo lokuba ngcono kunangaphambili. Kodwa idlala indima engenakusetyenziswa kwamanye amaqonga apho olu tshintsho lungenzeki ngamaxesha athile kwaye ngokungeyomfuneko.
2. Isixa sokuphuculwa
Ukuhlalutya oku ndifuna ukusebenzisa igrafu eboniswe ngezantsi. Qaphela ukuba umgca otyheli umelwe luphuculo olwenziwe kwimiyalelo esele ikho, ngelixa uluhlaza okwesibhakabhaka umele imiyalelo emitsha emiselweyo. Inguqulelo ka-2007 ibonakala njengonyaka xa kuye kwaphuculwa eminye imiyalelo (116), yongezwa kungabikho ngaphantsi kwemiyalelo engama-89 emitsha. Utshintsho lwalunento yokwenza nobuso obutsha bokubonwa kwe-3D, uphuculo ekusingatheni uburhabaxa, unikezelo kunye nomboniso ophilayo. Uyilo lwe3D alusasekelwanga kwizinto zakudala kwaye kufakwa umxholo weemodeli ze3D.
Igrafu elandelayo ithathwe Umbuzo we-AutoCAD, ibonisa indlela i-AutoCAD 2007 inguqulelo eye yahlala ixesha elide (umgca omnyama ohlaza okwesibhakabhaka), ukuya kuthi ga esiphelweni (ukusukela ngoJulayi 2012) kuboniswane nayo njenge-AutoCAD 2011 (umgca obomvu), kwaye ngokuqinisekileyo iyagqitha iinguqulelo zika-2009 (umgca luhlaza) kunye no-2008 engabonakali kwigrafu. Kuyaqondakala ukuba kutheni abantu bekhumbula uguqulelo luka-2007 njengenye yezona zilungileyo, kuba ifuthe lokuphuculwa komyalelo likubasebenzisi abakhona abaye bagqiba kwelokuba bahlale naloo nguqulelo ngaphandle kotshintsho kule minyaka ilandelayo.
Babecinga ukuba i-AutoCAD 2008 ibandakanyeke utshintsho oluthile, kwaye ukuba inguqulo ye-2009 yayingenaso isikhombiso esitsha esasenza kubangele.
Kuza kunqotshwa kwaze kwafika inguqulo ye-2010 kunye nemiyalelo ephuculweyo ye-93 kunye nokusetyenziswa okungcono kwe- lwakhiwo olutsha. Ikwangqinelana nohlobo luka-2007, kulapho iqala khona uthotho lophuculo ekusingatheni iimodeli ezinamacala amathathu kunye neNkxaso yeWindows 7 kwiibhithi ezingama-32 nama-64.
I-AutoCAD 2007: Ukuphuculwa kwemithetho esele ikho kuphucula ukuthembeka komsebenzisi kuhlobo lwe-AutoCAD. Kodwa ikwavelisa ukunganyaniseki kutshintsho kwiinguqulelo zamva.
Kuyabonakala ukuba i-AutoCAD 2010 idlula i-AutoCAD 2012 ngaphandle kwento entsha, kodwa kwivolumu yokubonisana iphezulu emva kokuqokelela iminyaka. Ngaphandle kokuba yi-AutoCAD 2007 ngamava anelisayo kakhulu kubasebenzisi, i-AutoDesk iya kwenza okwahlukileyo kwiinguqulelo ezintsha kuba ingayithandi kwintengiso. Kungenxa yoko le nto sibona ukuba inyathelo elilandelayo, i-AutoCAD 2010 iyayiphinda kodwa iyiphephe ngo-2012 eneendaba ezingaphezulu kophuculo.
3. Inani lezinto ezintsha
Ukubaluleka kubalulekile, sihloko esiye sigxininisa ngakumbi kwi-2007 inguqu apho kwakukho imiyalelo emitsha ye-89 kunye ne-2012 apho i-139 ifinyelelwa khona.
Nangona ifuthe elinalo kubasebenzisi xa kuthelekiswa nokuphuculwa kwemiyalelo ekhoyo iyamangalisa. Ukujonga igrafu elapha ngasentla, kuyabonakala ukuba ukuthandwa kwenguqu ye-AutoCAD ifikelela incopho yayo kwiinyanga zokuqala zonyaka emva kokumiliselwa kwayo, kanye xa kuvela uhlobo olutsha. I-AutoCAD ikwenza oku ngenyanga ka-Epreli, kwaye ukusuka apho ukwehla kuyaqala kuba sele kukho into entsha. Ukwehla okukhawulezileyo kuxhomekeke ekubeni uphumelele ukuthembeka kubasebenzisi bangaphambili, hayi abatsha.
Kodwa jonga indlela i-AutoCAD 2010 eyifumene ngayo eyona ndawo iphakamileyo ekuye zonke iinguqulelo, ngo-2012 akufikanga kwaphela i-80% yoku ngaphambi kokuqalisa ukwehla kwayo. Kuya kufuneka siqonde ukuba le nguqulo ka-2012 ifikelele kwimpembelelo enkulu kunezo zangaphambili ngenxa yenqanaba lokuyila, kodwa akunjalo. Kwaye isizathu kukuba ingxelo ka-2010 ineziphuculo ezingaphezulu kwimithetho esele ikho (93) ngokuchasene ne-46 yenguqulo ka-2012 ngaphandle kwento yokuba kukho izinto ezintsha kule yokugqibela. Inguqulelo ka-2010 isasetyenziswa kakhulu kunenguqulelo yango-2011 kwaye inokuphinda iqhubeke ingu-2012 kule minyaka mithathu izayo. Ngeli xesha i-AutoCAD 2013 iyakuba luguqulelo oludlulayo, njengoko uphuculo lwayo kunye neendaba zincinci ngaphandle kotshintsho kwifomathi ye-dwg, njengohlobo luka-2011 nangona lubuyile i-Mac version.
Uthando lokuqala oluhlala lusenzeka kube kanye ebomini ngezixhobo zekhompyuter, sonke sothuswa yenye yeenguqulelo zokuqala esizibonileyo, kwaye siyaqhubeka sikholelwa ukuba yayiyeyona nguqulo "nokuba indala" kwaye nasemva kokuba siyibonile. isiwe kwentsha siyaqhubeka nokuyithanda loo nguqulelo. Loo nguqulelo idla ngokuba yeyona isichaphazelayo ngeendaba zayo. Oku singakuqaphela kubasebenzisi abathi emva kweenguqulelo ezininzi bafumanisa ukuba i-R14 yayinomtsalane, kwabanye yayingonyaka ka-2000 owabothusayo ngokusetyenziswa kweebits ezingama-32, saze sabona izinto ezintle ezimbalwa de kwafika inguqulelo ka-2007 esasikholelwa ukuba ayifuni. kakhulu ngakumbi . Imbali yezinto ezintsha eziye zabangelwa yi-2012, nangona ndicacisa, uthando lokuqala kunye nezizukulwana ezitsha.
Kodwa uncedo lokuyila izinto ezintsha lusengqondweni zabasebenzisi abatsha. Abafundi beekholeji, nokuba utitshala wabo ubafundisa i-AutoCAD 2010, baya kuhlala bekwasebenzisa le yokugqibela; Yile nto yenzekileyo kwi-AutoCAD 2012 kunye nesizukulwana esitsha. Le nguqulo isezingqondweni zabasebenzisi abatsha, uphando esilwenzileyo kuFacebook luyangqina. Kodwa ukuvala eli candelo, esi sisigqibo sethu:
I-AutoCAD 2012: Inani elikhulu lezinto ezintsha kubandakanya ukuthandwa kakhulu kwinguqulelo kunye nezizukulwana ezitsha. Ayisiyiyo ukunyaniseka kwexesha elide.
4. Ukuqokelelwa kophuculo
Mhlawumbi le ngxaki enzima ukuyenza, kodwa siya kuyiqwalasela kuba ivelisa ukuba imvelaphi yezinto ezivelelayo kunye neyantlukwano kwindlela izinto ezenzeka ngayo kwezinye iinkqubo ezifana ne-Microstation.
Njengoko ixesha lidlulile, i-AutoCAD igcine imiyalelo ingasetyenziswanga, okanye ishiywe. Kancinci kancinci ziye zalahlwa, zaphuculwa okanye kwafakwa imiyalelo emitsha:
Kuze kube nguhlobo lwe-2006 kukho imiyalelo ye-674 esebenzayo.
Ngaphambi kokuba i-97 ilahlekelwe kwaye i-2013 yacinywa i-68 yashiywa.
I-2013 kukho yonke imiyalelo ye-1047 esebenzayo kwaye i-86 nje ayifumanekanga kulabo ababekho kule minyaka ye-10.
Iminyaka ye-2006 ne-2010 iyavela xa kukho ukutshabalaliswa kwemithetho engadingekile, i-53 ngokupheleleyo.
Oku kucoca akubonakali kakhulu kodwa kubonisa umsebenzi wangaphakathi wokufumana kwakhona imiyalelo eyayingasetyenziswanga kangako. Ngelixa eminye imiyalelo ichaza ukusebenza ngakumbi, ekusebenziseni inani elincitshisiweyo lelo nani lisetyenzisiweyo. I-AutoCAD ize ukusombulula ubomi bethu kwinto esiyenzileyo ngobusuku obuninzi bokungalali kwitafile yokuzoba, kuba ayitshintshanga kangako kuyo yonke le minyaka, kodwa itshintshile ekusingatheni iimodeli ze3D nalapho indaleko icothayo xa ithelekiswa nezinye nkqo I-AutoDesk, yabelwe kakuhle ngabasebenzisi.
Ukubala inani leemiyalelo kuyeke ukubaluleka kudala, kuba ngoku imiyalelo esetyenzisiweyo yiyo oyibonayo kumaqhosha. Kodwa kwiminyaka edlulileyo, ukuba besingawazi umthetho ... ibingekho. Kwaye ukuba ikuluhlu, besifuna ukubona ukuba yenzelwe ntoni.
Iinguqulelo ezingcono ze-AutoCAD
Ekugqibeleni, ezi ziinguqu ezilungileyo ze-AutoCAD:
I-AutoCAD i-2007 ibe yinguqu yokuba ukunyaniseka okuninzi kuphumelele ngaphezu kwexesha, umkhiqizo wenani leemigaqo ephuculweyo kunokuba zivelise ezintsha.
I-AutoCAD i-2012 ilandela njengomkhiqizo wenani elikhulu lokuphucula kunye nokwamkelwa okukhulu kwezizukulwana ezintsha.
I-AutoCAD i-2010 ibe yinguqu ebalulekileyo ukususela ekubeni bekuyixesha xa izizukulwana zaqala ukuwamkela ubuchule beRibhoni, kwaye amaninzi amaninzi ahlanganiswe kwi-modeling ne-3D ngokulula.
I-AutoCAD 2013 ... ayizukuba nguqulelo efikelela kwisithunzi sowama-2012. Ukulinda enye, kuya kufuneka silinde iminyaka embalwa.
Kwaye, yintoni eyona nto ingcono kakhulu?
IJHONNY PALACIOS uthi:
2007 eyona ibalaseleyo
UJosé María Velazquez uthi:
Nangona ndingasebenzi, ndenze umsebenzi kwi-AutoCAD '11 yeyona ndiyisebenzisa kakhulu.
Ndiyaqonda ukuba i-AutoCAD '08 indinika imisebenzi ekhawulezayo ngaphandle kokungafani.
Iingxaki zam kuphela zifumaneka kwisicelo kwi-Renders, umsebenzi ondizama ukusombulula ngawo ngoku.
Ngokuqinisekileyo, iR14 yayiyinkolelo enkulu.
Mhlawumbi ngenxa yokuba okokuqala sasiyinto into esicinga ukuba yinto engcono, kwiWindows
I-R14 yesiXhosa, yahlala iminyaka emininzi, iinguqu zaziqhubeka kwaye saqhubeka sisisebenzisa.
Ndicinga ukuba olona hlobo luhle kakhulu lwe-autocad alithandabuzeki ukuba ngo-2007, inezinto ezininzi eziphuculweyo kwimiyalelo nakwindawo yokuhlangana, kunye nokusebenza kwayo ngokungafaniyo, ukuphuculwa kwe-autocad 2010 ngaphezulu kokuphuculwa ziinguqulelo ezibandakanya uninzi lweempawu ezingafunekiyo kwaye zidida umsebenzisi kuphela, ngokoluvo lwam uguqulelo luka-2007 lolona lwanelisa zonke iimfuno zoyilo.
URoberto Morán uthi:
Lowo uveza ukuba uhlobo luka-2012 lwe-Autocad lolona lubonakala ngathi akakhange aqonde ukuba lubonisa impazamo enkulu, kuba ibhekisa kwiMilinganiselo (xa kusenziwa umlinganiso (x) kulinganiswa kwaye ulinganisa loo mgama ngomyalelo lowo. Kwahluke kakhulu, ukuba awukaboni ukuba lihlazo elingakanani, usebenza njani ngolu hlobo, yiyo loo nto kuye kwafuneka ndifake u-2013 olungise le mpazamo, kodwa endaweni yoko le nguqulo ityibilika ifuna imemori engakumbi nokuba ine-8 okanye i-16 Gigs xa iifayile ezisetyenzisiweyo zininzi kwiwindow enye ndiyathemba ukuba ingxelo elandelayo ayisenazo ezi mpazamo, olo luluvo lwam olulinganiselweyo.
JUAN EXPOSITO CASTAÑEDA uthi:
KAKHULU IZIMVO ZAKHO, ukuqalisa VERSION R14 KAKUHLE KAKHULU, kukhona abafumaneka bamalungisa UP Inani lo, kwakanye FAMILY Nina AutoCAD KUNYE kufuna AMAVA inkqubela YABASEBENZI EMEKO R2007 enkulu elula, Xa nAWE FAMILIARISAS kuxabisa kakhulu ukuyeka. Oku kufana imfonomfono lokuthenga uze FUNDA ZONKE amaqhinga. Koko wayeka Nina JAJAJAJAJAJAJJA ibiza imali eninzi. de kube lelo xesha
ngayo umbuzo wakho Ndicinga njani inguqulo ye AutoCAD ukuza kuthi ga ngoku i 2012 Ngokungathandabuzekiyo kuthi mna na ofuna ukufaka uguqulelo 2013 okanye wabamba ingqalelo yam, ndicinga ukuba 3 iinguqulelo engcono kungaba: 1. - AutoCAD 2012, 2 2007.- AutoCAD kunye AutoCAD 3 2010.-
Isiphelo: I-AutoDesk akufuneki ibe nemincili ngokukhupha ingxelo ye-AutoCad minyaka le, iyiminyaka kuphela endingazikhuphi iinguqulelo ukusukela ngo-2000 ngo-2001 nango-2003, ke xa bane-AutoCad eyenziwe kakuhle kuxa kufuneka beyisusile ukuze bangagcini ukungaguquguquki. hlaziya i-AutoCad ukuze woyike… iitas canelitas minyaka le. Imibuliso, Zihlobo zeGeofumadas.
Kwaye kwakungumxholo we-r12 we-Windows 98